Madaxweynaha Somaliland oo qaabilay Wefti ka socday Hay’adda Cuntada ee FOA iyo Ujeeddada Socdaalkoodu la xidhiidho - Somaliland Post
Home News Madaxweynaha Somaliland oo qaabilay Wefti ka socday Hay’adda Cuntada ee FOA iyo...
Madaxweynaha Somaliland oo qaabilay Wefti ka socday Hay’adda Cuntada ee FOA iyo Ujeeddada Socdaalkoodu la xidhiidho
Hargeysa (SLpost)- Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), ayaa maanta Xafiiskiisa ku qaabbilay Wefti sare oo ka socda Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabbilsan wax-soo-saarka cuntada iyo Xoolaha ee FOA oo socdaal shaqo oo muhiim ah ku yimi Caasimadda Hargeysa.
Kulankaas maanta waxaa Madaxweynaha ku weheliyey Madaxweyne Ku-xigeenka Somaliland Md. Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil (Saylici), Wasiirka Wasaaradda Beeraha Prof. Faarax Cilmi Geedoole, Wasiirka Madaxtooyada Xirsi Cali Xaaji Xasan, Wasiirka Qorshaynta Qaranka Dr. Sacad Cali Shire, Agaasimaha guud ee Wasaaradda Beeraha Cabdillaahi Ismaaciil Faarax iyo Xoghayaha Gaarka ah ee Madaxweynaha Cali Axmed Cali.
Wasiirrada Wasaaradaha Beeraha iyo Qorshaynta Qaranka Somaliland oo soo dhaweeyey Weftigaas, ayaa kulankaas ka dib waxay shir jaraa’id iyaga iyo Madaxa Hay’adda FOA ee Geesku wada-jir ugu qabteen xarunta Madaxtooyada Somaliland ee Hargeysa. Waxaanay Wasiirradu sharraxeen ujeeddada Weftiga iyo muhiimadda hawlaha ay dalka u yimaaddeen.
Wasiirka Wasaaradda Beeraha Somaliland Prof: Faarax Cilmi Geedoole oo ugu horreyn Shirkaa Jaraa’id ka hadlay, waxa uu yidhi; “Waxaannu maanta ku soo dhawaynay Madaxtooyada Wefti ka socda Hay’adda FOA, oo ah Madaxa FOA ee Somaliland iyo Somaliland oo weliba ah Madaxa FAO ee Kenya, isla markaana ah Madaxa FOA ee gobolka Geeska Mr. Luca Alinovi iyo Ku-xigeenkiisa, oo Salaan ugu yimi Madaxweynaha. Weftigaas oo nagala soo qaybgalay dhawr arrimood oo ah toddobaadkii Sugnaanta Cuntada iyo Biyaha Somaliland, isla markaana u yimi inuu furo Mashaariic ay ka sameeyeen Waddanka. Waxa kale oo uu u yimi si aannu uga wadahadalno arrinta Ayaxa.”
Wasiirka Qorshaynta Qaranka Dr. Sacad Cali Shire oo isaguna halkaa ka hadlay, ayaa sheegay inay Hay’adda FOA tahay mid dhinacyada kala duwan ee wax-soo-saarka kala shaqaysa Somaliland, wada-shaqayntaas oo uu rejeeyey inay halkaa ka sii korto oo ay noqoto mid yeelata waxtar si aad ah u muuqda.
“Sidaad giddigiin-ba la wada socotaan, iskaga fillaanshaha xagga cuntadu waa Siyaasadaha innoo mudan, Hay’adda FOA-na waa Hay’adaha ugu waaweyn ee innaga caawiya sidii aynu ula soo bixi lahayn dalag innagu filan hadday noqoto xagga Beeraha, Xoolaha iyo Kalluunka intaaba way innagala shaqeeyaan oo wada shaqayn ballaadhan baynu leenahay, waxaanan rejaynayaa runtii inay wada-shaqayntaas iyo wax-tarkaasi inuu noqdo mid halkaas ka sii kora oo sii ballaadha.” Sidaa ayuu yidhi Wasiirka Qorshaynta Somaliland Sacad Cali Shire.
Madaxa- Hay’adda FOA u qaabilsan Somaliland iyo Soomaaliya sidoo kalena ah Madaxa Kenya u qaabilsan ahna Madaxa Geeska ee FOA, Mr. Luca Alinovi, oo shirkaa jaraa’id ka hadlay, ayaa sheegay inuu aad iyo aad ugu faraxsan yahay sida ay Wasiirrada iyo Madaxweynaha Somaliland ugu soo dhaweeyeen Caasimadda Hargeysa, isaga oo xusay in Madaxweyna Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) oo uu xusay inuu Salaan ugu tegay u qaabbilay si qiimo sare leh oo uu sheegay inuu aad ugaga mahad-celinayo.